४५ जिल्लाका १ सय २८ क्षेत्रमा मतदान जारी – Dhadingnews.com – Exploring social, politics, agricultural, health, entertainment and district news of dhading.
४५ जिल्लाका १ सय २८ क्षेत्रमा मतदान जारी
प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:२४
काठमाडौं, २१,मंसिर । ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मतदान सुरु भएको छ । दोस्रो चरणमा विहिवार विहान ७ बजेदेखि १ सय २८ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु भएको हो ।
चितवन । नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भरतपुर महानगरपालिका–१४ भीमसेनगरस्थित आधारभूत शान्ति प्रावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । बिहान ७ बजेर १३ मिनेट जाँदा उनले मतदान गरेका हुन् ।
चितवन क्षेत्र नं ३ मा अध्यक्ष दाहाल वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार छन् । म तदान पछि सञ्चारकर्मीलार्ई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले गठबन्धन अनुसार नै आफूले मतदान गरेको बताए ।
दाहाल पत्नी सीता दाहाल र कान्छी छोरी गंगा दाहालले पनि सोही केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । भने माइली छोरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले निमावि सुन्दरबस्ती मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
यसैगरी महानगरको वडा नं २७ जानकी मावि केन्द्रबाट राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले मतदान गर्दैछन् । उनले मतदान गरेको चितवन क्षेत्र नं ३ बाट पाण्डे लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन् ।
चितवनको अर्को नगरपालिका राप्ती नगरपालिकाबाट नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मतदान गर्दै छन् । उनले वडा नं ५ को हल्थपोष्ट भवन भण्डारा केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन् । उनी चितवन क्षेत्र नं. १ बाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित नारायणी नमूना उच्च मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अनुशासन विभागका अध्यक्ष अमिक शेरचनले महानगरको वडा नं २६ को दिव्यनगर मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य काशीनाथ अधिकारीले रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नं ९ कपरफोरी केन्द्रबाट मतदान गर्दै छन् ।
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार ०९:२४ मा प्रकाशित